Somali daily News – Farmaajo Oo Balan Qaad U Sameeyay Guddoomiyeyaashii Degmooyinka Ee Xilka Laga Dhigay….
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa habeenkii Jimcaha soo galayay waxa uu xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya afur ugu sameeyay Gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir ee dhawaan xilka laga qaaday.
Farmaajo oo hadal kooban ka jeediyay munaasabada afurka kadib ayaa uga mahad celiyay Gudoomiyaashii hore ee Degmooyinka gobolka Banaadir shaqadii ay soo qabteen, waxa uuna u muujiyay in uusan ku farxin in dhamaan hal mar xilka laga wada qaaday.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ay xaaladooda si hoose ula socdaan Gudoomiyaashii hore ee gobolka Banaadir, waxa uuna tilmaamay in uusan dayici doonin loona raadin doono boosas katirsan dowlada Soomaaliya si looga faa’iideesto aqoontooda.
Sida aan Wararka ku heleyno Madaxweynaha ayaa masuul katirsan xafiiskiisa u xil saaray la socoshada xaalada Gudoomiyaashii hore ee degmooyinka gobolka Banadair, waxa uuna ku wargaliyay in CV-yadooda usoo gudbiyaan masuulkan katirsan Xafiiska Madaxweynaha .
Qaar kamid ah gudoomiyaashii hore ee Degmooyinka gobolka Banaadir oo iyana munaasabada ka hadlay ayaa ka warebixiyay xaaladooda iyo halistya soo wajahday marka xilka laga qaaday , waxa ayna Madaxweynaha uga mahad celiyeen afurka iyo balan qaadka uu u sameeyay .
Waxaa la filayaa in qaar kamid ah Gudoomiyaashii hore ee Degmooyinka gobolka Banaadir shaqo laga siiyo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya halka kuwa kalana la geenayo qaar kamid ah Wasaaradaha xukuumada Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hal mar shaqada ka wada eryaya 15-kamid ah Gudomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir, Gudoomiyaasha xilka laga qaaday ayaana hada rajo ka qaba in mar kale dowlada shaqo ka helaan.